संसारका धनाड्यहरु कस्तो गाडी चढ्छन् ?
फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भइसक्दा पनि उनी चढ्ने कार ‘एकुरा टीएसएक्स’ मोडलको मूल्य ३० हजार ६ सय ३५ डलर पर्छ ।
हामी कहाँ हुने खानेहरु महंगा गाडी चढ्छन् । जति धेरै धन दौलत कमायो, उत्ति नै गाडीको स्तर पनि उकास्दै लाने गर्छन् । अझ मध्यम वर्गिय परिवार पनि देखासेखीमा गाडी खरिद गरेर चढ्ने गर्छन् । अरुलाई देखाउनकै लागि आफ्नो औकात भन्दा बढीको गाडी किन्ने होड चल्छ, यहाँ ।
अब विश्वका धनाड्यहरु चाहि कस्तो गाडी चढ्छन् होला ? अर्बौं, खर्बौं कमाइ गर्नेहरुले के बहुमूल्य धातुले निर्मित गाडी चढ्छन् ? कि उनीहरु अति आरमदायक गाडी प्रयोग गर्छन् ? तथ्य फरक छ । विश्वका धनाड्यहरु आफ्नो शान सौकत गाडीमा देखाउँदैनन् । किनभने उनीहरु सामान्य गाडी चढ्छन्, उनीहरुको हैसियतभन्दा । बरु आफुले आर्जन गरेको अथाह सम्पति सामाजिक सेवामा खर्चन्छन् । यहा ँत्यस्तै धनाड्यहरुको कथा पस्किएका छौ ।
हामीले फेसबुक प्रयोग गर्छौं, जसको जन्मदाता हुन् मार्क जुकरबर्ग । उनी फेसबुकका मालिक हुन् । यस हिसाबले उनी विश्वका धनाड्यहरुको सूचीमा पर्छन् । युवा उमेरका उनी सर्वाधिक कमाइ पनि गर्छन् । तर, उनले आफ्नो धन कारमा खर्चिएका छैनन् । उनले सामान्य कार चढ्छन् । उनको कार आरमदायक र सुरक्षित त छ, तर भड्किलो छैन ।
मार्क जुकरबर्गको कुल सम्पत्ति ६५ दशमलव ५ अर्ब डलर रहेको छ । उनी विश्वका तेह्रौं शक्तिशाली व्यक्ति पनि हुन् । हाल फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भइसक्दा पनि उनी चढ्ने कार ‘एकुरा टीएसएक्स’ मोडलको मूल्य ३० हजार ६ सय ३५ डलर पर्छ ।